Daryeelka Dhalmada Ka Hor (Prenatal Care)
Author Topic: Daryeelka Dhalmada Ka Hor (Prenatal Care) (Read 27153 times)
« on: October 27, 2007, 12:23:11 AM »
Daryeelka dhalmada ka horreeya waa daryeel caafimaad oo aad heleysid inta aad uurka leedahay. Qorsheyso booqasho dhalmada ka horreysa isla marka ay kula noqoto in aad uur leedahay.
Booqashooyinkaan waxay kaa caawinayaan in aad uur caafimaad leh lahaato waxaana lagu ogaan karaa dhibaatooyinka ka hor inta aysan
kuwo daran kugu noqon adiga ama ilmahaaga.
Takhtarkaaga wuxuu dooni doonaa in uu ku arko 4-6 toddobaad ee kastaba mar 6-da bilood ee ugu horreysa ee uurka.
Waxaad u baahan doontaa in aad takhtarkaaga aragto in badan waqtiga saddexda bilood ee ugu danbeysa uurka.
Haddii aad dhibaatooyin qabto, takhtarku waxaa laga yaabaa in uu rabo in uu ku arko in badan ama baaritaan badan kugu sameeyo.
Maxaa laga filayaa Booqashooyinkaaga Dhalmada ka Horreeya
Booqashadaada ugu horreysa waxay noqon doontaa booqashada ugu dheer.
• Waxaa lagaa hubinayaa dhererkaaga, miisaanka iyo cadaadiska dhiigga.
• Dhiig ayaa lagaa qaadayaa si lagaaga baaro cudur iyo heerar hooseeya ee birta ama feerada. Waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad dooneysid in lagaa baaro HIV.
• Waxaad u baahan doontaa in aad sambal kaadi ah geyso si looga baaro jeermis, sonkor iyo borotiin.
• Waxaa laguu qiyaasi doonaa taariikhda aad dhaleysid, qiyaasta maalinta laga yaabo in uu ilmuhu dhasho.
• Waxaa lagu weydiin doonaa su’aalo adiga, lammaanahaaga, qoyskaaga, iyo daawooyinka iyo daawo geedoodka aad qaadato ku saabsan.
• Takhtarkaagu wuxuu kugu sameyn doonaa imtixaan jidh ahaaneed oo ay ku jiraan imtixaan sinaha ah oo uu la socdo dariiqada lagaga baadho kansarka ilma galeenka ee pap smear.
• Takhtarku wuxuu kuu sheegi doonaa in aad billowdo qaadashada fitamiin leh folic acid dhalmada ka hor.
• Ballan u sameyso booqashadaada ku xigta.
Marka la joogo booqashooyinka dhalmada ka horreeya oo dhan:
• Waxaa lagaa hubinayaa cadaadiska dhiigga, miisaanka, kaadida, iyo caafimaadka guud.
• Xaddiga garaaca wadnaha ilmahaaga iyo koritaankiisa ayaa la hubinayaa.
• Baaritaanno kale sida baarid dhiig ama ultrasound ayaa laga yaabaa in la sameeyo.
• Weydii su'aalo oo la qaybso wixii walaac ah ee adiga naftaada iyo ilmahaaga idinku saabsan.
Waxaa laga yaabaa in aad marto baaritaannada soo socda:
Baaritaanno dhiig si lagaaga baaro:
• Nooca dhiigga
• Heerka birta
• Cagaarshowga ama Jooniska Nooca B (Hepatitis B)
• Baaritaanka Alpha-fetoprotein (AFP)—Baaritaankan waxaa lagu hubinayaa halis korodhtay ee noocyada cilladaha lagu dhasho qaarkood ee ilmahaaga. Waxaa la sameeyaa inta u dhexeysa 15 ilaa 20 toddobaad ee uurka.
Haddii natiijada baaritaanku ay sarreyso, baaritaanno badan ayaa la sameyn doonaa.
• Baaritaanka Rh factor Baaritaankan waxaa lagu hubiyaa in lagu arko
Haddii Rh-kaagu uu jiro iyo haddii uusan jirin.
• HIV Haweenka oo dhan waa in ay tixgeliyaan in dhiigga laga baarayo si looga hubiyo HIV. Hooyooyinku waxay cudurkaan u gudbin karaan ilmahooda waqtiga uurka, foosha iyo naas nuujinta.
Natiijooyinka baaritaanku waa qarsoodi.
• Dhiig yarida unugga Sikal (Sickel Cell) loo yaqaanno waa lagaa baari doonaa haddii aad halis ugu jirtid.
Waxaad ugu yaraan mari doontaa 1 ultrasound waqtiga uurkaaga.
Takhtarkaagu waxaa laga yaabaa in uu doonayo in uu sameeyo ultrasoundyo badan si uu u hubiyo koritaanka ama xaaladda ilmaha.
Baaritaankaan waxaa lagu hubiyaa cudur hiddo-side waxaana badanaa la sameeyaa inta u dhexeysa 15 iyo 18 toddobaad ee uurka. Takhtarku wuxuu cirbad gelinayaa caloosha haweeneyda si uu u soo saaro dheecaan xoogaa ah oo yar ee unugyada ilmaha ku hareereysan (amniotic).
Dheecaanka waxaa loo dirayaa shaybaar si loo baaro.
Baaritaanka u dulqaadashada sonkorta (Glucose tolerance test (GTT))
Inta u dhexeysa 24 iyo 28 toddobaad ee uurka, waxaa lagaa baari doonaa sonkor dhiig oo sarreysa ee uurka, oo loo yaqaanno sonkorowga uurka (gestational). Waxaa lagu siin doonaa cabitaan macaan si aad u cabto ka dibna sambal dhiig ah ayaa lagaa qaadi doonaa.
Baaritaanka diiqo la'aanta
Baaritaankaan wuxuu makiinad gaar ah ku diiwaan gelinayaa xaddiga garaaca wadnaha ilmahaaga. Baaritaankan xanuun ma lahan wuxuuna ku lug leeyahay gaballo sharooto ah oo caloosha lagaaga dhejiyo.
Waqti kasta oo uurkaaga ka mid ah, isla markiiba dhakhatarkaaga la xiriir haddii aad:
• Xuubkaagu ama kiishka biyuhu dillaaco ama dalooshamo.
• Wax dhiig ahi kaa yimaado.
• Aad casiraad ama maroojin isku aragto taasoo ku qabanaysa in ka badan 4-6 goor saacad gudeheeda.
Daryeelka Dhalmada ka Hor (Prenatal Care) - 2
« Reply #1 on: October 29, 2007, 01:10:09 AM »
Hooyadu markay dhasho, waxay u baahan tahay daryeel gooni ah oo ka duwan kan kore, ka akhriso halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=624.0
Views: 4012 August 09, 2011, 04:37:49 PM
Views: 4464 April 14, 2012, 02:05:10 AM
Views: 6609 January 18, 2010, 04:09:25 PM
Views: 3639 January 25, 2010, 05:09:10 PM
Views: 6052 December 22, 2010, 06:25:57 PM